Mogadishu Journal » AMISOM oo loogu deeqay tobanaan bilyan oo shilin
Mjournal :–Midowga Yurub ayaa balaayiin shilinka Kenya ah ugu deeqay ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga.
Lacagtaa ayaa lagu bixin doonaa mushaaraadka AMISOM. Qarashkaa ayaa dhan ilaa 20 bilyan oo shilin Kenya ah.
Hishiis lacagtaa deeqda ah kusaabsan ayaa Khamiistii lagu duugay qalinka. Waxaa sidoo kale AMISOM laga siin doonaa lacagtaas gunooyinkoodii 9kii bilood ee lasoo dhaafay oon wali la siin.
Qarashka 20ka bilyan ah ee loogu yaboohay ayaa u dhigma 178 m oo giniga Ingiriiska ah.
Shalay Jimcihii, ciidamada AMISOM ayaa sheegay in qarashkaa mushaaraadka ciidamadaa lagu bixin doono.
“Midowga Yurub qarashka laga helay waxaa lagu bixin doonaa gunnooyinka ciidamada iyo booliska AMISOM, mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah ee caalamiga ah iyo kan maxaliga ah, iyo weliba maamulka hawlgalka.” Sidaa bayaan AMISOM kasoo baxay shalay ayaa lagu sheegay.
Dhan kale, QM ayaan wali diidan in ay ciidamada AMISOM u aqoonsato ciidamo nabad ilaalin ah ama diidan inay u rogto AMISOM ciidamo nabad ilaalineed!
Ciidamada AMISOM ayaa haatan Soomaaliya ku sugan muddo 10 sano ku dhow ayadoo dalalka soo diray iyo Midowga Afrikaba ay sheegaan in ay yihiin ciidamo nabad ilaalineed.